Mac Mini M1 inomhanya Linux: yatove mukana | Linux Vakapindwa muropa
Imwe yenyaya hombe Hardware ye2020 yaive yekuti Apple yakafumura processor yayo nyowani nemidziyo yaizoivaka. Iyo Cupertino kambani ichaenda kuARM, chimwe chinhu chakatotanga ne Mac Mini M1, uye kubvira ipapo vamwe vagadziri vatotanga kutaridza zvirinani pane ichi chivakwa. Dambudziko nderekuti kutanga kunonetsa, uye yakawanda software haina kutsigirwa. Asi zvinhu zviri kutanga kuchinja.
Vazhinji vavaki vakuru vakatovandudza software yavo kuti vashande ne Apple silicon, uye mazhinji acho akatoburitsa vhezheni yakatsigirwa zvizere. Asi iyo shanduko yekushandura inoitawo kuti zviome kushandisa mamwe masisitimu anoshanda, uye pakutanga kana Windows kana Linux yaigona kushandiswa paMac Mini M1. Windows yanga ichishandiswa kwenguva yakareba, zvirinani mumuchina chaiwo, uye kubva nhasi unogona kushandisa linux.
Mac Mini M1, Apple yekutanga komputa ine yayo ARM SoC inoenderana neUbuntu
Aya ndiwo mabudiro akaita Chris Wade mangwanani ano, asi achitaura izvozvo mumuedzo wake akashandisa Live chikamu chakatangwa kuburikidza ne USB:
Linux ikozvino inoshandiswa zvachose paMac mini M1. Kubhururuka kubva kuUSB kuzere Ubuntu desktop (rpi). Network inoshanda kuburikidza ne USB c dongle. Kwidziridzo inosanganisira rutsigiro rweUSB, I2C, DART. Tichapusha shanduko kuGitHub yedu uye dzidziso gare gare nhasi. Kutenda kune @CorelliumHQ timu ❤️? pic.twitter.com/uBDbDmvJUG
- Chris Wade (@cmwdotme) January 20, 2021
Linux inogona kushandiswa zvizere paMac mini M1. Booting yakazara Ubuntu desktop (rpi) kubva kuUSB. Iyo network inoshanda kuburikidza ne USB kiyi c. Iyo yekuvandudza inosanganisira rutsigiro rweUSB, I2C, DART. Isu tinotumira shanduko kuGitHub yedu uye dzidziso gare gare nhasi. Kutenda kuchikwata @CorelliumHQ.
Chikwata chekuita izvi chave chiri Corellium, uye maitiro avakasarudza ave Ubuntu 20.10 Groovy Gorilla. Hazvisi zvese zvinoshanda zvakakwana uye kuchine zvakawanda zvekukwesha, asi izvi zvinoratidza kuti Linux ichashanda paMac Mini M1 uye nemamwe macomputer Apple, nekuti kambani inotungamirirwa naTim Cook haina kutadzisa Linux kumhanya pamakomputa avo matsva.
Kana iwe uchinetseka kuti nei kuisa Linux pane MacZvakanaka, pachangu, chimwe chinhu chandisingazoite, kunze kwekunge chainyatso kudikanwa uye ini ndakachiita nekaviri kutanga. Iko kune zvekare kumwe kuita: shandisa iyo Live Session kutora mukana kumaturusi eLinux pasire pokubata yekuzvarwa kuisirwa. Chero chingave chikonzero, idzi inhau dzakanaka, uye timu ichawedzera pairi nedzidziso inosanganisirwa mumazuva anotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linux ikozvino inowirirana neMac Mini M1 neApple Silicon